Home News MW Axmed Madoobe: Somaliya waxa ay qarka u saaran tahay dagaal sokeeye?
MW Axmed Madoobe: Somaliya waxa ay qarka u saaran tahay dagaal sokeeye?
Madaxweyne Axmed Madoobe oo kulan la qaatay wafdi heer sare oo ka socday dowladda Sweden ayaa u sheegay in Soomaaliya qarka u saaran tahay in dagaal sokeeye ay dib uga soo cusboonaado hadii ayan dowlada dhexe ka leexan dariiqa khatarta ah ee ay ku socoto. MW Axmad Madoobe ayaa yiri “ficilada ka socda Magaalada Muqadishu ee lagu sheeganayo in amniga lagu sugaayo ay calaamad u tahay in dagaal beeleed cusub uu dib u soo curto.” MW Axamed Madoobe ayaa ka digay in beesha caalamka ayan taageero ku bixin in la isku diro beelaha Soomaaliyeed.
Hadalka Axmad Madoobe ayaa yimid ka dib markii Wasiirka Arimaha Dibada ee Sweden uu wadiiyay Axmed Madoobe sida uu u arko qorshaha dowlada ee xasilinta Magaalada Muqadishu. Waxa isa soo taraya dareenka beesha caalamka ka qabto qorsha uu wato Ra’isal Wasaare Kheyre oo lagu beegsanayo beelaha ku dhaqan magaalada Muqadishu.
Previous articleGobolka Banadir oo furtay Xafiis Amni! Amniga Muqadishu oo noqday alad ganacsi?
Next articleFarmaajo oo la kulmayo Wafdi ka socda Dowlada Soomaalind? Maxaa laga hadlayaa?
Abu Bakr al-Baghdadi Hogaamiyaha Daacish oo lasheegay in Duqayn lagu dilay
Dowlada Soomaaliya Oo si Indho la’aan ah utaageertay Sacuudiga